katsi & Mouse Mobile Slot Game -Mobile Casino Plex
katsi & mbeva ndiwo 5 nokudzedzereka, 9 payline muchero muchina mutambo kuwanikwa pana mFortune Casino. Game zvinosanganisira kunonakidza zviratidzo zvakadai somunhu pfumbu mbeva, munhu shava katsi, katsi uye mbeva mari bhegi chiratidzo, mumwe mousetrap uye vamwe chizi, uyewo hwaikosha achitamba makadhi. Kunewo zvina mubayiro trails izvo zvinosanganisira katsi kudzinganisa negonzo uye hunoita kuti kuhwina mari yokuwedzera. Pamusoro pe, mutambo zvinosanganisira mhuka zviratidzo, Muparadzire zviratidzo, multipliers, vakasununguka Tunoruka uye jackpot.
Play Cat & Mouse panguva Our Recommended Casino
Sei Tambai Game
sezvo Cat & Mouse muchero muchina mutambo, ndiyo nyore mutambo kudzidza kutamba. Unogona kuridza zvokungonakidzwa kuti vawane vanonzwa kuti mutambo kana kutamba kuti mari chaiyo kutanga kuhwinha hakuna nguva. Kutanga mutambo unogona vanoisa bheji zvinogona kuva yaderera 10p.
Negonzo ndiyo zviratidzo mhuka izvo Sevamiririri zvimwe zviratidzo, kunze Kuparadzira chiratidzo kana bhonasi mutambo chiratidzo kuti kupedza kuhwina mubatanidzwa.
Katsi ndiyo Kuparadzira chiratidzo. Kana chamupidigori nhatu kana kupfuura paradzira zviratidzo rimwe mutsetse unenge paakavapa vakasununguka Tunoruka.
The katsi uye mbeva mari bhegi ndiwo jackpot chiratidzo uye kana iwe chamupidigori mashanu izvi hwokushingaira. payline, muchaiswa paakavapa rose jackpot.
Kana chamupidigori maviri kana kupfuura makomba mbeva hwokushingaira. payline, uchapinda bhonasi mutambo. Muchabviswa kuti nokutamba bhodhi rine mbeva uye katsi. Unofanira vagokungurusa mijenya mukuedza kuchengeta negonzo mberi katsi. Muchapiwa maererano dzinoungana nyika pamusoro uye kwenguva yakareba vanogona kuchengeta negonzo mberi katsi. Unogona kukunda payouts huru mutambo uyu.